Ii-cookies zeLinzer, ngesiqhelo iKrisimesi | IBezzia
Ii-cookies zeLinzer, ngesiqhelo iKrisimesi
Ngaba ujonge iresiphi yokuthambisa uSuku lweeKumkani ezintathu? Inkqubo ye- ii-cookies ze-linzer lukhetho oluhle kakhulu. Nangona ezi iikeyiki zeti ziyaziwa unyaka wonke kwiivenkile zepasta kwisixeko saseAustria iLinz, kukho isithethe eside sokwenza ekhaya ngeKrisimesi.
Intlama yayo yebhotolo iyenza ibe mnandi ngaphandle kokuzalisa. Nangona kunjalo, nge ukugcwaliswa kwejam bafikelela kwelinye inqanaba. E-Bezzia sisebenzise i-blueberry jam ukuwagcwalisa ngeli xesha, kodwa sizamile nge-blackberry, raspberry kunye neapricot jam kwaye ngekhe sazi ukuba sikhetha eyiphi.
Ukwenza kubo kulula. Kuya kufuneka ukhathazeke ngezinto ezimbini kuphela: ibethe ibhotolo kakuhle kunye neswekile de ufumane umxube ococekileyo nomhlophe kuqala; kwaye uthintele inhlama ekutshiseni kakhulu ngokuphathwa, uyibeke efrijini imizuzu emihlanu ukuba kukho imfuneko ngexesha lokusika ikuki. Ngaba siza kuhla siye kushishino?
1 Izithako ze-cookies ezili-30
Izithako ze-cookies ezili-30
180g. ibhotolo kwiqondo lokushisa
1 itispuni yetyuwa
2 amacephe obisi
Itispuni yencindi yevanilla
I-1/2 ithisipuni yesinamoni (ngokuzithandela)
300g. uflawa wengqolowa
I-1/3 ithisipuni yomgubo wokubhaka
Iipuniwe ezili-10 zeblueberry okanye iziqhamo ezibomvu okanye ijamberry
Yibethe ibhotoloityuwa neswekile esityeni de ufumane umxube okhilimu.
Ke yongeza iqanda Kwaye uphinde ubethe de udityaniswe.
Emva faka ubisi, ivanilla nesinamon kunye nomxube.
Ekugqibeleni yongeza umgubo kunye nemvubelo yemichiza yahluzwa yaxutywa nespatula ukwenza ibhola.
Songa intlama ngeplastiki kwaye gcina kwifriji I-30 minutos.
Emva kwemizuzu engama-30, shushu i-oveni iye ku-180ºC uze ususe isiqingatha sentlama efrijini.
Ukukhupha inhlama kumgubo ocoliweyo ukuya kwi-2 kunye ne-3mm ubukhulu.
Ukuba uqaphela ukuba inhlama ishushu kwaye ithambe kakhulu, yibeke efrijini imizuzu emihlanu ukusika ii cookies ngokucocekileyo.
Sika nge-cutter cutter Zonke ii-cookies kwaye uzibeke kwiphepha lekuki elinephepha lesikhumba.
Bala ii-cookies kunye nesiqingatha sazo zibenze babe ngumngxuma ophawu embindini.
Hlanganisa intlama eseleyo kwaye uyikhuphele ngaphandle kwakhona ukuze wenze ii-cookies ezininzi okanye uyigcine kunye nefriji ukuba akusekho kuki kwitreyi.
Bhaka ii cookies imizuzu eyi-10-12 okanye de iqale ukuba mnyama. Emva koko bakhuphe kwaye ubayeke bapholise kwiraki.
Qhubeka ngendlela efanayo kunye nayo yonke intlama kude kube kubhake ii cookies.
Ukugqiba, beka icephe lejam Kwisiseko ngasinye nakwizi ndawo ezihambelana netyhubhu.
Nciphisa iswekile Ii-cookies zeLinzer kwaye wonwabe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iresiphi » Postres » Ii-cookies zeLinzer, ngesiqhelo iKrisimesi
Izigqibo New Year ukuba uza ukuphumeza
Iimaski zobuso bendalo ezenziwe ngekofu